Jaranjarada qaloocan ee ACE waxay gurigaaga u abuureysaa meel xarrago leh oo il-qabad leh. Naqshadaha jaranjarada qaloocan waxaa lagu sameeyay dawaarle oo leh cabbirro gaar ah iyo agab si loo abuuro naqshad kaamil ah oo ku habboon mar walba. La kulan naqshadeeyayaasha la -talinta ACE si bilaash ah si ay kaaga caawiyaan inaad aragtidaada u rogto dhab oo aad beddesho booskaaga oo leh qaybo dhisme oo gaar ah.
Balustrade 12mm dhalada dhalada/ birta aan birta lahayn, 10/ 12mm dhalooyinka galaaska/ bir birta aan lahayn/ la habeeyay galaas kulul ama dahaar leh；A3 birta; SS304/316 Cad, satin ama muraayad
Qiimaha nidaamka jaranjarada qaloocan waxaa lagu go'aamin doonaa cabbirka guud ee jaranjarada aad u baahan tahay, iyo sidoo kale xulashooyinka dhammaystirka ee aad doorato.
Ka dib marka la oggolaado sawirrada dukaanka, nidaamkaaga jaranjarada qalooca wuxuu u soo baxaa wax -soo -saarka warshadeena Foshan, Shiinaha. Waxaan leenahay alwaax, biro, iyo tas -hiilaad samaynta dhalooyinka si aan u awoodno inaan soo saarno qayb kasta oo jaranjaradaada ah.
Ujeeddada geedi -socodkeenna been -abuurka ayaa ah in habka rakibidda loo sameeyo sida ugu fudud ee suurtogalka ah. Xarigga xarigga ayaa la gooyaa dhererka saxda ah ee aad u baahan tahay. Waxaan ka soo baxnaa treads-ka halka barxadda fidinta ay aadi doonto, oo xitaa waxaan horay u qodnaa godadka godadka treads-ka meesha saxda ah ee boosteejooyinka biraha. Waxaan sidoo kale leenahay rakibidda tijaabada kahor shixnadda.
Marka nidaamkaaga jaranjarada la been abuuro, waxaan ku rari doonnaa sawirka tilmaamaha rakibidda oo waxaan ku bixin doonnaa tilmaamaha rakibidda onlayn. Badeecadahayagu waa fududahay rakibidda DIY iyo inta badan alxanka uma baahna. Mashaariicda intooda badan waxaa lagu dhamayn karaa maalmo yar gudahood.
Hore: Beam Labalaab ah oo aan lahayn Birta Stringer Jaranjarada Toosan
Xiga: Birta Anti-Rust Steel Steel Spiral Staircase ee Meel Yar
Naqshadaynta Jaranjarada Qaloocan
Qorshaha Jaranjarada Qaloocan
Dib -u -habeynta Jaranjarada Qaloocan
Jaranjarada Laba -Laaban
Jaranjarada Qalooca ee Casriga ah